यी हुन् विश्वका पाँच खतरनाक महिला जासुस ! हेर्नुस् - Everest Dainik - News from Nepal
यी हुन् विश्वका पाँच खतरनाक महिला जासुस ! हेर्नुस्
हेलेन विटाकर, बीबीसी । जासुसी ड्रामा धेरैका लागि निकै रोमाञ्चक हुनसक्छ । अझ त्यसमाथि जासुसी कहानीमा कुनै महिला हत्यारा हुने हो भने त्यो थप रोचक बन्ने गर्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो कारण हो महिलालाई यस्तो प्रकारको भूमिकामा कमै देखिन्छ र जुन सामान्य हुँदैन त्यसले सँधै आकर्षित गर्छ ।
यी त भए काल्पनिक कहानीका कुरा तर यहाँ यस्ता महिलाको कहानी बताइएको छ जो वास्तविक जीवनमा एक खतरनाक जासुस थिए र उनीहरुको जीवनशैली अचम्मित गरिदिने कहानीले भरिएको छ ।
१. डबल एजेन्ट ‘माता हारी’
मार्गेथा गिरत्रुइदा म्याकलियोडलाई ‘माता हारी’ को नामले चिनिन्छ । उनी एक कामुम नृत्यांगना थिइन् जसलाई पहिलो विश्वयुद्धमा जासुसी गरेको आरोपमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो । माता हारीको जीवनमा सन् १९३१ मा हलिउड फिल्म बन्यो जसमा ग्रेटा गर्बो मुख्य भूमिकामा थिइन् ।
मार्गेथाको जन्म होल्याण्डमा भएको थियो र विवाह एक फौजी क्याप्टेनसँग । एउटा नराम्रो सम्बन्धमा फसेकी मार्गेथाले आफ्नो नवजात शिशुलाई पनि गुमाइन् ।सन् १९०५ मा मार्गेथाले आफूलाई ‘माता हारी’ को पहिचान दिइन् र इटालीको मिलानस्थित ला स्काला र पेरिसको ओपेरामा एक कामुक नृत्यांगनाको रुपमा उदाइन् ।
त्यतिबेला मार्गेथा हराइसकेकी थिइन् र उनी माता हारीको नामले मानिसहरुबीच चर्चित थिइन् । आफ्नो पेशाका कारण उनका लागि यात्रा गर्नु सजिलो थियो ।यसकारण जर्मनीले प्रथम विश्वयुद्धको क्रममा माता हारीलाई पैसाको बदलामा जानकारी साझा गर्ने प्रस्ताव गर्यो । यसरी नै उनी जर्मनीकी जासुस बनिन् ।
माता हारी आफैंले त कसैको पनि हत्या गरिनन् तर उनको जासुसीका कारण लगभग ५० हजार फ्रान्सेली सैनिकको हत्या भएको थियो । त्यसपछि फ्रान्सलाई उनीमाथि शंका लाग्न थाल्यो । सन् १९१७ फेब्रुअरीमा उनलाई पेरिसबाट पक्राउ गरियो र अक्टोबरमा उनको गोली हानी हत्या गरियो ।
उनको हत्या भएको सय वर्ष पछि उनको अपराधमा पुनः बहस सुरु भयो । माता हारीलाई आज पनि ‘फेमिनिन सिडक्शन’ र देशलाई धोका दिने प्रतिकको रुपमा लिइन्छ ।
२. शार्लेट कार्डीः
शार्लेटको पूरा नाम मेरी एन शार्लेट डी कार्डी थियो र उनी फ्रान्सको क्रान्तिको हिस्सा बनिन् । शार्लेट एक गिरोडिन थिइन् । फ्रान्सको क्रान्तिमा गिरोडिन ती हुन् जो राजशाहीलाई जरैबाट उखेल्न चाहन्थे तर उनीहरु हिंसाका विरोधी थिइन् । तर क्रान्तिका लागि हिंसालाई नस्विकार्ने शार्लेटले आफ्ना विपक्षी ज्याकोबिन समूहका नेता जिन पल मेराटको हत्या गरिन् ।
जुलाई सन् १७९३ मा शार्लेटले बाथटबमा नुहाइरहेका मेराटलाई चक्कुले हमला गरिन् । जब उनलाई यसका लागि पक्राउ गरियो तब शार्लेटले यसलाई देशको हितमा गरिएको हत्या बताइन् । एकजनाको हत्या गरेर आफूले हज्जारौंको ज्यान बचाएको उनले दाबी गरिन् । तर त्यसको चार दिन पछि नै उनलाई मृत्युदण्ड दिइयो ।
३. शी जिआनकिआओः
जासुस आफ्ना उपनाम राख्न रुचाउँछन् र यसै तथ्यलाई यथार्थमा परिवर्तन गर्दै शी गुलानले जासुसीको दुनियाँमा आफ्नो नाम शी जिआनकिआओ राखिन् ।जिआनकिआओ आफ्नो बुवाको मृत्युको बदला लिन जासुस बनिन् । उनको हत्या चीनका नेता सुन चुआंगफांगले सन् १९२५ मा गरेका थिए ।
त्यसको १० वर्षपछि जिआनकिआओ एक बौद्ध मन्दिरमा पुजा गरिरहेका बेला चुआंगफांगले उनलाई टाउकोमा गोली हानिन् । उनको हत्या गरेपछि घटनास्थलबाट भाग्नुको साटो उनी त्यही बसिन् र आफ्नो अपराध कबुल गरिन् ।
यो हाई प्रोफाइल केसमा सन् १९३६ मा निर्णय भयो र जिआनकिआओलाई दोषमुक्त गरियो । यसबारे अदालतले उक्त हत्या आफ्नो पिताको हत्याले आहात भएर गरिएको बतायो । सन् १९७९ मा शि जिआनकिआओको मृत्यु भयो ।
कुनै बेला जर्मनीकी सबैभन्दा खुंखार महिला मानिने ब्रिगित मोअनहप्ट रेड आर्मी फ्याक्शनकी सदस्य थिइन् । ब्रिगित सन् १९७७ मा जर्मनीमा एक आतंककारी गतिविधीमा संलग्न भइन् ।
७० को दशकमा पश्चिम जर्मनीमा एक बाम चरमपन्थी समुहद्वारा एकपछि अर्को गर्दै थुप्रै अपहरण, हत्या र बम हमला गरियो । यो समूहले जहाज अपहरणका साथै लगभग ३० व्यक्तिको हत्या गर्यो । यो अपराध पश्चिम जर्मनीमा पुँजीवादलाई समाप्त गर्ने नाममा गरियो ।
सन् १९८२ मा यो अपराधमा संलग्न भएका कारण मोअनहप्टलाई पक्राउ गरियो र पाँच वर्षको सजायँ सुनाइयो । यसबाहेक उनलाई ९ जनाको हत्याको मामलामा थप १५ वर्षको सजायँ दिइयो । मोअनहप्टले कहिले पनि आफ्नो अपराध स्विकारिनन् र सन् २००७ मा उनी परोलमा जेलबाट बाहिर निस्कने मौका पाइन् । उनी अझै जीवितै छिन् ।
५. एजेन्ट पेनेलोपः
इजरेली इन्टेलिजेन्स एजेन्सी मोसादका लागि काम गर्ने एजेन्ट पेनेलोपे प्यालिस्टिनी समूह ब्ल्याक सेप्टेम्बरका नेता अली हुसेन सलामेको हत्याका संलग्न थिइन् ।अली हुसेनले सन् १९७२ मा म्युनिख ओलम्पिकको क्रममा ११ इजराइली खेलाडीलाई बन्धक बनाए र उनीहरुको हत्या गरिदिए ।
यो हत्याको जवाफमा इजरेली प्रधानमन्त्री गोल्डे मेरीको आदेशमा ‘अपरेशन व्रैथ अफ गड’ सुरु भयो जसमार्फत अली हुसैन सलामेको हत्या गरियो । अली हुसेनलाई हत्या गर्नका लागि पेनेलोपेले उनी बस्ने अपार्टमेन्ट नजिकै लगभग ६ हप्ता बिताइन् ।
जुन बम हमलामा अली हुसेन सलामेको हत्या भयो त्यसमा पेनेलोप पनि मारिइन् । मृत्युपछि उनको सामानमा एउटा बेलायती पासपोर्ट पनि भेटियो जसमा नाम लेखिएको थियो एरिका चेम्बर । -रातोपाटीबाट साभार
ट्याग्स: Khatrnak agent mahila